Shina · Febroary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Febroary, 2019
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Febroary, 2019
Taiwan (ROC)13 Febroary 2019
Shina: Mandeha dia mikatona ny Youtube
Mediam-bahoaka11 Febroary 2019
Voalaza fa nikatona nandritra ny roa andro (4-5 Marsa) ny Youtube tao Shina. Araka ny filazan'i William Long, tsy tafiditra tao amin'ny tranonkala youtube ny mpiserasera nanomboka ny 4 Marsa tamin'ny 8 hariva. Niverina ny tranonkala ny sasakalin'ny 5 Marsa, saingy araka ny filazan'i Shizhao (tao amin'ny twitter), naharitra 10 minitra ihany...
Hafanam-po11 Febroary 2019
Notazonin'ny polisy Mawei ao Fujian nandritra ny herinandro mahery ilay bilaogera Peter Guo Baofeng. Araka ny tatitry ny twitter (efa voasakana), Nangataka tamin'ireo enina notazonina mba hanasonia fiaiken-keloka sy hiaiky fa nanao heloka bevava amin'ny fanalam-baraka sy fanaparitahana tsaho ho takalon'ny famotsorana azy ireo ny polisy ao Mawei.
Shina: Fanesorana ireo vondrona antserasera (E-group) ao amin'ny Douban.com
Voatery nanakatona ny sasany tamin'ireo vondrona antseraserany ny Douban.com, iray amin'ireo tranonkala Web 2.0 malaza indrindra ao Shina noho ny fanentanana manohitra ny Smuts vao haingana. Na dia izany aza, ara-tsosialy sy ara-politika amin'ny endriny fa tsy baranahiny na tsy mendrika ny ankamaroan'ireo vondrona antserasera nofafana.